घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? वास्तु शास्त्रको सुझाव र चेतावनी!!! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← विश्वको लोकप्रिय प्रचलन जाति र भाषाको आधारमा राज्यको नाम
क्रिस्मस आउन २ दिन बाँकी, सम्पूर्ण कुवेतवासी नेपालीहरुलाई क्रिस्मसको निम्तो →
Posted on 23/12/2011 by राजु गुरुङ्ग |2टिप्पणीहरु
घर निर्माण आमनेपालीको प्राथमिकताको सपना हो तर घर निर्माण गर्दा वास्तुको पनि त्यत्तिकै विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । होइन भने जीवनभरको कमाइ खर्च गरेर बनाइएको घर गलपासो मात्रै पनि हुनसक्छ । के कस्तो कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्दछ त ? ज्योतिषाचार्य शिवराज सुवेदीको सुझाव-चेतावनी ।
घर बनाउन सामान्यतः जीवनभरकै कमाइ लाग्छ । त्यसरी बनाइएको घर घरमूलीको प्रतिकूल बनेमा घरमा बस्नेले नाना प्रकारका समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । सन्तान, दाम्पत्य र व्यवहारमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । गृहस्थीले गृहसुख पाउँदैन । जस्तो : भर्‍याङ दक्षिणावर्त हुनुपर्छ । भुलेर पनि बामवर्त हुनु हुँदैन । दक्षिणी गोलार्धमा भने यो ठीक विपरीत हुन्छ । भुलेर पनि भर्‍याङ बायातर्फ मोडिदै माथि उक्लेको हुनु हुदैन । त्यस्तो घरमा रहने व्यक्ति सदा रोग र तनावयुक्त हुन्छ । व्यवसायमा मन्दी भइरहन्छ । व्यवहारमा हामी सबैले देखे भोगेकै कुरा हो, विवाहपछि र घर बनाई सरेपछि भाग्यमा शुभ या अशुभ परिवर्तन हुने गर्छन् । त्यसैले यो उखान प्रचलनमा आएको हुनुपर्छ- नारी र बारी कर्मले पारी । यहाँ घर बनाउँदा विचार पुर्‍याउनुपर्ने केही कुरा प्रस्तुत गरिएका छन् । आफ्नो प्रचलित नामको राशिबाट ठाउँको राशि २, ५, ९, १०, ११ औं भएमा त्यो ठाउँमा बस्दा शुभ हुन्छ । प्रचलित नाम नै राशिको नाम भए झनै राम्रो । जस्तो शिवराजको राशि कुम्भ, चाबहिलको राशि मीन । कुम्भबाट मीन दोस्रोमा पर्ने हुँदा शिवराज चाबहिलमा बस्नु शुभकर हुन्छ । पुतलीसडक बस्नु अशुभ हुन आउँछ । यसैगरी हरेक सजग व्यक्तिले ठाउँ आफूलाई अनुकूल हुने गरी चयन गर्नुपर्छ । आफ्नो वर्ग -तालिका १) देखि ५ औं वर्ग सदैव शत्रु हुन्छ । अर्थात तपाईंको नाम ‘क’ वर्गबाट आउँछ भने ‘प’ वर्गबाट नाम आउने कुनै ठाउँमा तपाईंलाई अशुभ हुन्छ । आफ्नै वर्गमा पनि शत्रुता हुन्छ । तपाईंको वर्गदेखि तपाईं बस्ने ठाउँको वर्ग छैठौंमा धन हानि हुन्छ । आठौंमा रोग हुन्छ । वास्तुरत्नावली वास्तुका लागि प्रामाणिक ग्रन्थ मानिन्छ । यस अनुसार आफू बस्ने ठाउँको नक्षत्रदेखि आˆनो नाम नक्षत्रसम्म गन्दा आˆनो नाम नक्षत्र ५ नक्षत्रभित्रै परेमा त्यो ठाउँमा वस्दा लाभ हुन्छ । ६, ७, ८ औं भए धन हानि हुन्छ । ९ औदेखि १३ औसम्म परेमा धनधान्य वृद्धि हुन्छ । चौधौंदेखि १९ औसम्म परेमा स्त्री हानि हुन्छ । २१ औंदेखि २४ औसम्म परे सम्पत्ति हुन्छ । २६ औं वा २७ औं भए विलाप हुन्छ । ठूला सहरमा टाउन वा टोललाई लिनु पर्छ । यो आवासको लागि मात्र हो ।
व्यवसायको लागि स्थान चयन
व्यवसायको लागि कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा काकिणीबाट विचार गर्नुपर्छ । काकिणी भनेको धन हो । कुन व्यक्तिले कुन ठाउँमा आफ्नो व्यवसायको मुख्य कार्यालाय स्थापना गरेमा व्यवसाय सधैं नाफामा चल्छ भन्ने विचार निम्न प्रकार गरिन्छ –
तालिका १ मान
अ, आ, इ, उ, ए, ओ, औ १ अवर्ग
क, ख, ग, घ, ङ, क्ष २ कवर्ग
च, छ, ज, झ, ज्ञ ३ चवर्ग
ट, ठ, ड, ढ, ण ४ टवर्ग
त, थ, द, ध, न, त्र ५ तवर्ग
प, फ, ब, भ ,म ६ पवर्ग
य, र, ल, व ७ यवर्ग
श, स, ष, ह ८ शवर्ग
व्यक्तिको प्रचलित नामको पहिलो अक्षरको मान ह + ठाउँको नामको पहलो अक्षरको मान ै/८ शेष नामकाकिणी हुन्छ ।
र ठाउँको नामको पहिलो अक्षरको मान ह + व्यक्तिको प्रचलित नामको पहिलो अक्षरको मानै/८ शेष ग्रामकाकिणी हुन्छ ।
नामकाकिणी जहिले पनि ग्रामकाकिणीभन्दा बढी भएमा त्यो ठाउँमा व्यवसाय फस्टाउँछ ।
निष्कर्ष भयो, डिल्लीबजारको काकिणीभन्दा शिवराजको काकिणी धेरै भएकोले डिल्लीबजारले शिवराजलाई दिन्छ । त्यहाँ शिवराजले पसल व्यवसाय खोलेमा लाभ नै हुन्छ । यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो तापनि व्यक्तिको जन्मकुण्डलीअनुसार शुभ ग्रहको दशा अन्तर्दशा, व्यक्तिलाई फाप्ने पेसा र अन्य भौतिक सामाजिक विचार पनि गरेमा व्यवसायी सफल हुन्छन् । एवं प्रकारले आˆनो शुभ व्यावसायिक स्थान चयन गर्न सकिन्छ ।
गाउँ, सहर वा कोलोनीभित्र आफ्ना लागि आवास चयन उपर्युक्त तालिकामा देखाइएजस्तै कुनै पनि सहर वा वस्तीलाई नौ भागमा विभाजन गर्ने । मेष आदि राशिका व्यक्तिले तत् तत् सहर वा वस्तीको तत् तत् दिशामा आवास नबनाउने । जस्तो, काठमाडौंको पूर्व दिशा अर्थात् पशुपति क्षेत्रतिर वृश्चिक राशिका व्यक्ति नबस्ने । एवं प्रकारले माथिको तालिका अनुसार बुझ्ने ।
मोहडा, प्रवेशद्वार चयन नियम
माथि बताइएअनुसार शवर्ग -श, स, ह, ष) ईशान दिशामा बलवान् हुन्छन् । अवर्ग पूर्वदिशामा, कवर्ग आग्नेय दिशामा, चवर्ग दक्षिण दिशामा, टवर्ग नैऋत्य दिशामा, तवर्ग पश्चिम दिशामा, पवर्ग वायव्य दिशामा, यवर्ग उत्तर दिशामा बलवान् हुन्छन् । आˆनो वर्गदेखि पाँचौ वर्ग जहिले पनि शत्रुवत् हुन्छ । तसर्थ पाँचौं वर्गको दिशामा मूल गेट बिर्सेर पनि नबनाउने । जस्तो, अवर्गका व्यक्तिले पश्चिम दिशामा मूल प्रवेशद्वार बनाएमा निकै अशुभ हुन्छ । एवं प्रकारले अन्यवर्गले पनि यो बिचार गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । पाँचौ वर्गको दिशा बाहेक अरू वर्गको दिशामा मूल गेट बनाउन सकिन्छ ।
प्रवेशद्वार बनाउदा स्मरणीय कुरा के छ भने घडेरीको लम्बाई वा चौडाइको मध्यभागमा मूल गेट कदापि नबनाउने । गृहमध्ये कृतं द्वारं द्रव्यधान्यविनाशनम् । घरको पनि मध्यभागबाट प्रवेशद्वार बनाउँदा घरमा सह रहँदैन । घर या घडेरीको चौडाइतिर प्रवेशद्वार कुनातिर बनाइयो भने त्यो भरमा दुख र शोक हुन्छ । भनिएको छ, विस्तारकोणकं द्वारं दुःखशोकभयप्रदम् ।
कर्कट, वृश्चिक, मीन राशि भएका घरमूलीलाई पूर्वतिर मुख्य प्रवेशद्वार भएको घर शुभ हुन्छ । घरमूली भन्नाले जसको नाममा घर छ त्यो व्यक्ति बुझिन्छ ।
वृष, कन्या, मकर राशिहरूका लागि दक्षिणतिर मूलढोका, मिथुन, तुला, कुम्भ राशिहरूलाई पश्चिममुखी प्रवेशद्वार र मेष, सिंह, धनु राशिवालालाई उत्तराभिमुख गेट फाप्छ ।
2 responses to “घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? वास्तु शास्त्रको सुझाव र चेतावनी!!!”
letter of recommendation | 27/12/2011 मा 6:10 अपराह्न |
nirja pokhrel | 08/12/2013 मा 6:19 अपराह्न |
banako ghar ma bastu namilako6vana k garna